Mabaadi'da aasaasiga ah si loo sameeyo walxaha garaafka gebi ahaanba waxtar leh | Abuurista khadka tooska ah
Markaad fulineyso shey kasta oo xayeysiis ah waa muhiim inaad bixiso feejignaanta lagama maarmaanka u ah waxyaabaha sameeya, Sababtoo ah isku-darka kuwan oo ay weheliyaan hanashada naqshadeeyaha ayaa noo oggolaan doona inaan haysano qalab iib ah oo waxtar leh.
Marka xigta waxaan u sharaxaynaa wax yar xubno kala duwan taasi waxay guul siin doontaa dhammaan soo saarayaasha garaafyada.
1 Mabaadi'da aasaasiga ah ee abuuritaanka jaantusyo wax ku ool ah
1.2 Taageerada iyo dhameystirka
Mabaadi'da aasaasiga ah ee abuuritaanka jaantusyo wax ku ool ah
Kahor intaadan bilaabin sameynta naqshad kasta waa muhiim samee qaab macquul ah taasoo muujineysa sharcinimada iyo hufnaanta macluumaadka aad rabto inaad ku dhejiso nashqadda. Sidoo kale, waa inaan ogaano in abaabulka arintani kaliya ku xirnaan doonin waxa ku jira laakiin sidoo kale waxay ku xirnaan doontaa taageerada aan ku jirno.
Taageerada iyo dhameystirka
Tani waa wax ay tahay inaan wada ogaanno laakiin waxaa mudan in markale la xuso kuwa shakiga qaba ama kuwa aduunkan ka bilaabaya.
Markii hore iyo at bilaabida farriinta xayeysiinta Waxaa muhiim ah in si cad loo qeexo warbaahinta ama warbaahinta taas oo ay ku fiicnaan doonto inaan bilowno, taasi waa, waa inaan u hel taageerada ugu waxtarka badan annaga. Waqtigan xaadirka ah waxaan bilaabi doonnaa inaan isweydiino su'aalo qaar, sida haddii aan isticmaaleyno taageero qadka ama ma waxaan adeegsaneynaa mid khadka tooska ah ah, haddii aan ku daabaceyno waraaq ama aan ku sameyno taageero adag.
Waa inaan sidoo kale isweydiino haddii buug-yarahan si fudud loo soo daabici doono ama aan geeri iyo varnish udhigi doonno.
Waxay kuxirantahay ujeedada aan dooneyno inaan gaarno, iyadoo loo eegayo nuxurka aan dejineyno, sida ku cad dadweynaha ay isgaarsiintu rabto inay gaarto iyo waxyaabo kale oo badan, waxay kala duwanaanta xulashada warbaahinta tanina waxay go'aamin doontaa guusha shayga aan dooneyno inaan iibino. Waa inaan ogaanno kahor inay jiraan taageerooyin badan iyo dhammeystir ahaan sida walxaha xulashadeena mid ama tan kale ay ku xirnaan doonto, laakiin kani waa go'aanka mid kasta oo nashqadeeyayaasha ah.
Nuqul wanaagsan waxaa muhiim ah inay jirto guul fariin kasta, laakiin tani muhiimad weyn ayey ku leedahay farriimaha iyo cinwaannada cinwaannada xayeysiinta, laakiin walxo kasta oo nashqadeysan waa inaad la shaqeysaa qoraallada si ay uga saxan yihiin oo keliya waxa ku saabsan higaadda laakiin sidoo kale inay iyagu waa qancin, cad, ku habboon dadka aad rabto inaad la xiriirto, sharraxaad iyo fahan dhammaan noocyada dhagaystayaasha maaddaama hal nooc oo dhagaystayaal ah uusan arki doonin xayeysiiskayaga.
Haddii aynaan ku fiicnayn qorista qoraallada, waa inaan gacan ka helnaa qoraa wanaagsan oo ku xeel dheer arimahan si uu ugu fuliyo nuxurkeenna habka ku habboon, maxaa yeelay dhammaan sharciyada iyo astaamaha higgaadinta waa in la ixtiraamo, maxaa yeelay tani way saamayn kartaa annaga maxaa yeelay akhristayaal badan ayaa tan ogaan doona oo waxay bilaabi doonaan inay na dhaleeceeyaan haddii aan qoraalka si wanaagsan loo dhammaystirin.
Inta badan wakaaladuhu waxay leeyihiin koobiga kooxahooda. Kuwa aan aqoon, nuqulku wuxuu ka kooban yahay qoraallo ka kooban hal abuur hal abuur leh.
La xoog iyo saameyn leeyahay sawir aad u wanaagsan lama diidi karo, markaa waa muhiim ku taageer fariimaha qoraalka ah sawirro qaarkood Taasi waxay ku mahadsan yihiin xirfadle, kaas oo siin doona xayeysiinta taabasho macquul ah oo xirfad leh.
Haddii wax soo saarka sawirada aan la samayn karin, waxaa jira kumanaan bangiyada sawirka ka madaxbannaan taas oo qiimo aad u hooseeya ay macquul tahay in la helo noocyo kala duwan oo xulashooyin ah, laakiin waa inaan ka taxaddarnaa doorashadan maxaa yeelay haddii aan xoojino ku xadgudubka sawirrada guud waxaan ka dhigi karnaa naqshadeena mid u eg qabow oo aan shakhsiyan ahayn, xaaladahaas oo muhiim ah xulashada sawirka waxaa sameeyay nashqadeeyaha mas'uulka ka ah fulinta mashruucan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Mabaadi'da aasaasiga ah si ay u sameeyaan xubno graphic gebi ahaanba wax ku ool ah
Tilmaamaha qaarkood si dib loogu helo dhiirigelinta nashqadeynta garaafka